Mgbapụ nke EA Lite - Best Forex EA's | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
HomeFree Forex EAsMgbapụ nke EA
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- Free Forex EAs 0
Ọ bụ nsụgharị nke Gbapụ EA enwe oke oke nke enyere 0.03. Usoro ahia na-adabere na breakout nke oke ọnụọgụ ego. Ngalaba mbata na-ahapụ gị ka ị soro ọ bụla ọwa ahịa na oge dị iche iche. Na Forex Expert Advisor enwere ike iji ya mee ihe dị ka onye na-esi ísì ụtọ nakwa maka ịzụ ahịa site n'iji ọkwa. Gbapụ EA anaghị eji akara na usoro dị oke egwu, dị ka martingale, ahia ahia, oke ụlọ, wdg.
Iji mepee ememe, EA na-edozi dị ka iwu na ókèala mpaghara na oge a kapịrị ọnụ. Onye ọ bụla n'ime iwu ahụ nwere uru dị na ya ma chebe ya site nkwụsị nkwụsị. Ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ agbajila ókèala ọwa tupu oge etinye iwu, a gaghị etinye iwu ọ bụla na ntụziaka a.
Iji mekwuo uru ma belata ọnwụ, ọ ga-ekwe omume iji nkwụsị na-akwụsị. EA nwere usoro Ego Management ọsọ ọsọ: ọ nwere ike iji otu ihe edozi, akụrụngwa (dabere na nkwụnye ego) na ọtụtụ nchịkọta (dabere na ọkwa dị ize ndụ), nke na-enye gị ohere ijikwa mfu ọ bụla.
Maka kachasị nsonaazụ na ọnọdụ ntụgharị, a na-atụ aro iji iji akaụntụ ECN na gbasaa ngwa ngwa na igbu ngwa ngwa, VPS ngwa ngwa, na ọrụ ịkwụghachi ụgwọ.
Mgbapụta nke EA EA - Ntinye Ndị Ntinye
MagicId - NJ pụrụ iche nke ọkachamara ọkachamara.
RangePeriod - oge iji chọpụta nha ọwa (ọkwa dị elu na nke ala).
RangeSize - ọwa nkewa (ọnụ ọgụgụ nke RangePeriod oge).
RangeMaxRatio, RangeMinRatio - usoro kachasị na opekempe kachasị elu nke ọwa dịgasị na ntaneti dịka oge ikpeazụ 50 (eg RangeMaxRatio= 0.6 pụtara na ọwa ga-abụ ihe na-erughị 60% nke nkezi).
ColdStart - ntinye ozugbo (nke bu eziokwu) nke ichere iwu na EA amalite ma ọ bụ maliteghachi, na-echere mmalite oge (ụgha).
HS, MS - oge (awa na mbepu) iji dozie iwu.
Ọ, M - oge (awa na mwepu) ka ihichapụ iwu ma ọ bụ mechie iwu.
MaxLot - kachasị nke otu usoro (setịpụrụ na 0.03 na mbipute a).
MainLot - iji otutu nza (maka Mgbaghara mode).
LotType - otutu nhọrọ nhọrọ.
Mgbaghara - nza uzo nhata MainLot.
LotRisk - otutu a na-agbakọ na-adabere na ọkwa dị ize ndụ FactorRisk.
LotAuto - otutu na-adabere na nzaba akaụntụ na FactorAuto.
FactorRisk - kacha allowable ọnwụ kwa iji,% nke AccountEquity.
FactorAuto - AccountEquity kwa nke ọ bụla MainLot.
unit - họrọ nkeji maka Stoploss na Weebụ:
Azu -% nke ọwa dịgasị iche (maka ịzụta iwu Kwụsị: 0% bụ ókèala ala dị ala, 100% bụ oke mgbago;
Weebụ - were uru bara uru.
Stoploss - kwụsị uru ọnwụ.
Nhazi - mee ka (On) ma ọ bụ gbanyụọ (Gbanyụọ) ọrụ nkwụsị akwụsị.
TrailStart - ọnụ ọgụgụ nke pips si n'aka ọnụahịa na-akwụ ụgwọ iji mee ka ọ kwụsị ọrụ.
TrailStop - ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke pips site na ọnụahịa ahụ ruo nkwụsị nke nkwụsị na-akwụsị.
ShiftUp - nnofe ntanye n'usoro ntinye aka n'osisi nke kachasi elu (> 0 pụtara n'elu ókèala, <0 pụtara n'okpuru ala), na pips.
ShiftDn - ngbanwe nhazi nke ntinye aka n'ókè nke ala ala (> 0 pụtara n'okpuru ala, <0 pụtara n'elu ókèala), na pips.
ShowInfo - gosi (ezi) ma ọ bụ zoo (ụgha) panel panel (ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji gbanyụọ panel ahụ n'oge ule na njikarịcha).
InfoFontColor, InfoFontSize - agba na ogo ederede e gosiri na panel Ama.
ShowRange - mee (n'ezie) ma ọ bụ gbanyụọ (ụgha) ngosipụta ngosi nke ọwa na fibonacci ọkwa (ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkwụsị n'oge ule na njikarịcha).
RangeColor - agba nke ọwa na Fibonacci etoju.
Ibudata Agbara EA Lite
Ebe A bụ Download gị (Kacha ọhụrụ na Version)
Nyocha GOLD Scalper PRO EA
Nyocha BF Scalper PRO EA
usoro ọkwa na fibonacci
Mgbapụ gbapụ EA
ngbanwe onye na-etinye usoro nhazi
Ezughari BMA Echere EA